Madaxweynaha Jubbaland oo tagay halka ay dowladda Kenya ka dhiseyso darbiga kala xiraya xadduuda Soomaaliya iyo Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Jubbaland, | ogaden24
Madaxweynaha Jubbaland oo tagay halka ay dowladda Kenya ka dhiseyso darbiga kala xiraya xadduuda Soomaaliya iyo Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Jubbaland,
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa booqashadii ugu horreeysay ku tagay Sabtidii shalay xadduuda Soomaaliya iyo Kenya ee kala qeybiya magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera.
Booqashadan waxaa ku waheliyay Madaxweynaha mas’uuliyiin ka tirsan dowlad-gobolleedka iyo saraakiil ciidan,waxaana ay kormeeren dhismaha darbiga Kenya ay ka wado xadka labada dal.
Dhismaha darbiga ayaa hadda ka socda meel ka baxsan halkii markii hore ay dowladda Kenya ay sheegtay inay ka dhiseyso darbiga,kaddib markii lugu eedeyay dowladda Kenya inay ku soo durugtay xadka Soomaaliya.
Dowladda Kenya oo faahfaahisay ujeedka dhismaha darbiga, waxaa ay ku sheegtay Kenya inay kaga hortagto weerarada uga imaanaya al-Shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland oo isagu darbiga halka laga dhisayo tagay ma usan sheegin hadal ka dhan ah dhismaha socda, waxaana booqashadiisa ay qayb ka ahay kormeer uu ku marayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, isagoo booqday xeradii al-Shabaab ay weerareen todobaadkii hore ee duleedka degmada Beledxaawo.